တရုတ်စွမ်းအားမြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | Guo Hong
စွမ်းအားမြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကိုကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သောဖိုင်ဘာလေဆာအရင်းအမြစ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်အရာဝတ္ထုများကိုအာရုံစိုက်ပြီးချက်ချင်းအရည်ပျော်မှုနှင့်ရေငွေ့ပျံမှုကို ဦး တည်စေသည်။ အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ ဒီအဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်သည်အဆင့်မြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာနည်းပညာ၊ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်တိကျသောစက်ယန္တရားနည်းပညာများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
အကာအကွယ် pover နှင့်အလိုအလျောက်လဲလှယ်စားပွဲနှင့်အတူ။
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Precitec ဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်းစဉ် - အနက်ရောင်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာ
non-inductive perforation, မြန်နှုန်းမြင့်စစ်ဆင်ရေး၊ auto focus၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောကွဲပြားသောပစ္စည်းများနှင့်သံမဏိပြားများ။ သေးငယ်သည့်ကျစ်လစ်။ တောက်ပသောမျက်နှာပြင်၊ burrs မပါဘဲချောမွေ့သောဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်း၊ လေဆာခေါင်း၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှုကိုအပြည့်အဝတံဆိပ်ခတ်ထားပြီး၎င်းသည် optical အပိုင်းအစများကိုဖုန်မှုန့်များနှင့်မညစ်ညမ်းစေခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတည်ငြိမ်သည်။
ကောင်းမွန်သောပြေးစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ပုံသဏ္toာန်ပြင်းထန်စွာခုခံနိုင်မှု၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ မြင့်မားသောစွမ်းအားနှင့်တာရှည်ခံမှုတို့ဖြင့်မြင့်မားသောဖိအားသွန်းသော Alumium ရောင်ခြည်သည်မြင့်မားသောပြေးတုန့်ပြန်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့်လေဆာဖြတ်စက်အတွက်အားကောင်းသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ ပြည့်စုံသောရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်အမှားများကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဒေတာဘေ့စ်ကိုအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများနှင့်အထူများ၊ ထိရောက်သောအလိုအလျောက်သိုက်လုပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှု၊ ပုံကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဂရပ်ဖစ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခြင်း၊ စက်ကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေရန်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်အသိဉာဏ်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ခုန်ပျံကျော်လွှားခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုလိုက်နာပါ။
စက်ပုံစံ GHJG-3015 ◆ GHJG4020 ◆ GHJG6020 ◆ GHJG-6025 ◆ GHJG-6030
အလုပ်လုပ်areaရိယာ 1500x3000mm ◆ 2000x4000mm ◆ 2000x6000mm ◆ 2500x6000mm ◆ 3000x6000mm
၁။ အလွန်နိမ့်သောကုန်ကျစရိတ် - လေကို သုံး၍ သတ္တုအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊
2.High performance - မူလတင်သွင်းထားသောဖိုင်ဘာလေဆာအရင်းအမြစ်များ၊ သက်တမ်းသည်နာရီ ၁၀၀၀၀၀ ကျော်နိုင်သည်။
၃. အမြင့်ဆုံးမြန်သောအမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှု - တစ်မိနစ်လျှင် ၁၀ မီတာပါးလွှာသောပြားများကိုဖြတ်တောက်သည်။
5. အနားနှင့်မျက်နှာပြင်များသည်ချောချောမွေ့မွေ့ချောမွေ့။ လှပသောအသွင်အပြင်ဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့ကောင်းမွန်သည်။
တိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် servo မော်တာနှင့်ဂီယာစနစ် ၆ ။
အမျိုးမျိုးသောဂရပ်ဖစ်နှင့်စာသားဒီဇိုင်းသက်ဆိုင်နယ်ပယ်များကို enable 7. အမျိုးမျိုးသော software ကို, စစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသည်။
အဓိကအားဖြင့်သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ မန်းဂနိစ်စတီး၊ သွပ်သွင်းထားသောအလွိုင်းများ၊ အလွိုင်းစာရွက်များ၊ ရှားပါးသတ္တုများကိုလျင်မြန်စွာဖြတ်တောက်ရန်အတွက်သတ္တုပြားများသို့မဟုတ်ပြွန်များဖြတ်တောက်ခြင်း။
ရှေ့သို့ ၈ နှစ်တင်ပို့သည့်စက်မှုလေဆာစက် - Aluminum Beam Cast - Guo Hong
နောက်တစ်ခု: အပြည့်အဝပူးတွဲဖိုင်ဘာ Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ဖိုင်ဘာလေဆာလေဆာ cnc စက်